संसारको अहिलेसम्मकै छाडा विवाह ! नव दम्पतिले के के गरे ? (फोटोफिचर) - Sagarmatha Online News Portal
एजेन्सी । हरेका मानिसको जीवनमा विवाह एक महत्वपूर्ण पाटो हो । चाहे त्यो महिला होस, वा पुरुष ! दुवैको जीवनमा विवाहले एउटा महत्वपूर्ण अवसर समेत प्रदान गर्छ ।
तर, संसारमा यस्ता मानिसहरु पनि छन्, जो आफ्नो महत्वपूर्ण क्षणलाई संसारकै छाडा विवाहको रुपमा परिचित गराउन उद्देलित हुन्छन् । अनि उनीहरुको इच्चा अनुसार शरीरका विभिन्न अङ्गहरु देखाएर फोटो खिच्दै विवाह गर्छन् । उनीहरुले खिचेका फोटो केवल क्यामेरा, मोबाईलमा मात्र सिमित हुँदैन ! केहि समयपछिनै सामाजिक सञ्जालमा अपलोड भएर भाईरल हुन्छ ।
पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा संसारकै छाडा विवाह गरेका केहि नव दम्पतिहरुको फोटोलाई ट्रोल बनाइएको छ । नव दम्पतिको छाडा विवाहको फोटो पोष्ट गर्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखिएको छ, ‘बाँच्नु मात्र पर्छ, यो संसारमा कस्ता कस्ता मानिसहरुको क्रियाकलाप देख्न सकिन्छ ।’
यी फोटोहरु यस्ता छन्, जो अहिलेसम्मकै संसारका मानिसले फोटो देख्ने बित्तिकै ‘कस्तो छाडा दम्पति’ नभनेको सायदै होला । फरक–फरक पोज, फरक–फरक आशनमा दम्पतिले फोटो खिचेका छन् । हुन त विश्वको अधिकांश देशमा धेरै व्यक्तिगत स्वतन्त्रता छ । त्यसैले पनि उनीहरु ढुक्कले यस्ता छाडा फोटोहरु सामाजिक सञ्जालमा अपलोड गर्छन् । तर, कतिपय देशमा भने महिलाहरुले शीरदेखि पाउसम्म छोपिने बुर्का लगाएर हिड्ने समाज र देश पनि यही छन् ।
विद्युतिय इन्टरनेटको माध्यमले विश्वलाई नै सानो गाउँ जस्तै बनाई रहेका बेला, संसारको जुनसुकै कुनाबाट भएपनि सामाजिक सञ्जालमा फोटो पोष्ट गर्नेबित्तिकै धेरै मानिसको हातहातमा भएको विभिन्न ब्राण्डका मोबाईल, ट्याबलेट, ल्यापटप, नोटबुक र कम्प्युटरको स्क्रिनमा पुग्छ । त्यसैले आजभोली दिनका दिन यस्तै अनौठा अनि अपत्यारिलो धेरै फोटोहरु विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा भाईरल भैरहेका छन् ।
अल्बानियाको टेलिभिजनमा ब्रा खोलेर समाचार पढिन्छ ! तपाई पत्याउनु हुन्छ ? (भिडियोसहित)
वेश्यालमा पुग्दा आफ्नै श्रीमती भेटिएपछि …!
वडा अध्यक्षको चर्तिकला : अर्काकी श्रीमतीसँग शारीकि सम्पर्क गर्दागर्दै रंगेहात पक्राउ !
हेरौं संसारकै अहिलेसम्मका छाडा नव विवाहित दम्पतिका फोटोहरु !
Published On: ९ असार २०७६, सोमबार 1361पटक हेरिएको